गर्भावस्था लक्षण सप्ताह द्वारा, गर्भावस्था कैलक्यूलेटर, भिडियो
2 हप्ता गर्भवती
8 हप्ता गर्भवती
12 हप्ता गर्भवती
16 हप्ता गर्भवती
गर्भावस्था क्यू र ए
प्रश्न सोध्नका लागि
गर्भावस्था लक्षण सप्ताह हप्ता
गर्भावस्था कैलक्यूलेटर र गर्भावस्था भिडियो
गर्भवती पेटको संसारमा स्वागत छ! हामी एक मुस्कानको साथ भन्छौं किनभने यो धेरै चीजहरूमध्ये एक हो जुन तपाइँले गर्भवती हप्ताको समयमा हप्तामा प्रयोग गर्नुहुनेछ। गर्भवती महिलाको जीवनमा सबैभन्दा रोमाञ्चक समय हुन सक्छ, तर यो प्रश्न र चिन्ताहरू पनि भरिएको छ। गर्भावस्था विकासको रूपमा, तपाइँ थाहा नहुन सक्ने प्रत्येक हप्ताको आशा र गर्भावस्था लक्षण बारे हप्ता हप्ता हप्ता बारे उत्सुक हुनुहोस्। हामी मद्दत गर्न सक्छौं।
तपाईंको अनुमानित मितिको बारेमा सोच्नेहरूको लागि, हामी एक प्रस्ताव गर्छौं गर्भवती हप्ता कैलकुलेटर मिति अनुसार, जो धेरै मदद गर्दछ। हामी तपाईंको मिति कसरी गणना गर्न निर्देशन दिन्छौं। हप्तामा गर्भवती लक्षणहरूको बारेमा सूचित रहन प्रायजसो फेरि जाँच गर्नुहोस्। हाम्रो प्रश्न र प्रश्नहरू पढ्नका लागि हाम्रो क्यू र ए सेक्शन भ्रमण गर्नुहोस्। हामीलाई तपाईंको गर्भावस्था हप्ताको हप्तामा पर्दामा राख्नुहोस्। के तपाइँ सामान्य संकेतहरू, असामान्य अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ? तपाईंको नयाँ गर्भावस्थाको सम्बन्धमा चिन्ताको कुनै पनि कारण? हामी डाक्टर होइनौं तर हाम्रो जानकारी मद्दत गर्न सक्दछौं। हामी यो निर्धारित गर्न सक्दछ कि गर्भावस्थाको तपाईको चरणको समयमा तपाईंको गर्भावस्था लक्षण हप्ता हप्ता हप्ता सामान्य हुन्छ। फेरि, यो राम्रो छ जब तपाईं जान्नुहुन्छ कि हरेक हप्ताको आशा कस्तो छ। हामी हप्ता हप्ताको जानकारीबाट सुरु हुँदैछौँ गर्भावस्था लक्षण सप्ताह 1। हप्ता2हप्तामा गर्भावस्था को लक्षणहरू, हप्ता 5, आदि हप्तामा हप्ता गर्भावस्था कैलकुलेटर द्वारा एक हफ्ते हुन्छ, तपाईंको पात्रो र तपाईंको बच्चालाई यो उल्लेखनीय माध्यम मा निगरानी गर्न एक क्यालेन्डर सहित
गर्भावस्था भिडियो सीरीज
हप्ता 1 -हप्ता2-हप्ता3– हप्ता4-हप्ता5– हप्ता6– हप्ता 7-हप्ता 8 -हप्ता9– हप्ता 10 – हप्ता 11 -हप्ता 12 – हप्ता 13 – हप्ता 14 – हप्ता 15 -हप्ता 16 – हप्ता 17 – हप्ता 18 -हप्ता 19 -हप्ता 20 – हप्ता 21 – हप्ता 22 -हप्ता 23 – हप्ता 24 – हप्ता 25 हप्ता 26 -हप्ता 27 – हप्ता 28 – हप्ता 29 – हप्ता 30 – हप्ता 31 -हप्ता 32 – हप्ता 33 – हप्ता 34 – हप्ता 35 -हप्ता 36 – हप्ता 37 - हप्ता 38 – हप्ता 39 – हप्ता 40
हामी कहाँ गर्न सक्छौं, हामी सान्दर्भिक प्रदान गर्दछौँ गर्भावस्था भिडियोहरू साथै। हामी मुख्यतया मुख्यतया स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आधारित छन् र गर्भावस्थाको सुझावहरू प्रदान गर्दछौं र हप्तामा गर्भवती हप्ताको समयमा सल्लाह माथि माथिको लिंक लिङ्क जस्तै। तिनीहरू तपाईं द्वारा ल्याइएका छन् उपभोक्ता स्वास्थ्य डाइजेस्ट। हामी यद्यपि विस्तार गर्दैछौँ, र भिडीयो तल रहेको पृष्ठ तल तल बालबालिकाको लागि खरिद गर्दछ। हामी बच्चाहरु को लागि खरीदारी को बारे मा नियमित रूप देखि पोस्ट जोडेंगे, उपहार दर्ता, यहां सम्म कि बच्चाहरु लाई बौछार को बारे मा।
तर गर्भावस्थामा थप जानकारीको लागि अर्को वेबसाइट चाहिन्छ? हामी यति सोच्छौ! एकको लागि गर्भावस्था हप्ता कैलकुलेटरले तपाईंको मितिको गणना गर्न मद्दत गर्नेछ। तपाईंसँग यस बिन्दुमा केहि प्रारम्भिक प्रश्नहरू छन्: सबै गर्भावस्था लक्षण हप्ता हप्ता हप्तामा के हो? केही चाँडै के हो गर्भावस्था को चेतावनी संकेत? यदि मलाई गर्भवती छ भने मलाई थाहा छ, वा गर्भावस्था परीक्षणहरू सही छन् वा कसरी छनौट र बाधाग्रस्त हुन्छ। शायद तपाईसँग एसटीडी र गर्भावस्थामा गर्भवती वा गर्भवती हुँदा व्यायाम गर्नु पर्दछ। प्रत्येक चरणमा हप्तामा फरक तल्लो तह र गर्भावस्था लक्षणहरू के हुन्। शायद तपाईं स्तनपान, बच्चा सूत्र, आदि को बारे मा सोच्दै हुनुहुन्छ गर्भावस्था हप्ता कैलकुलेटर र हाम्रो साइट मा अन्य जानकारी को माध्यम ले, गर्भवती द्वारा हप्ता, हामी यी प्रश्नहरू र धेरै धेरै जवाफ दिन चाहन्छौं! हामी तपाईंको गर्भावस्था को रैखिक, समय आधारित फैशनमा आवरण गर्दछौं, हप्तामा तपाईंको गर्भावस्था हप्तामा, ट्रिमिस्टर ट्रिमिस्टर गर्न। हामी तपाइँलाई गर्भवती जानकारी अघि र गर्भावस्था पूर्व गर्भावस्थाको साथमा गर्यौं, तपाइँ गर्भवती गर्नुभन्दा पहिले विचार गर्न विचार गर्दछ। हामी एक कदम अगाडी जान्छौं, डेलिभरीमा छलफल र आजको संसारमा एक स्वस्थ बच्चा उठाउँदै। निरन्तर विकासको साथ, मितिको आधारमा गर्भावस्था हप्ता क्यालेन्डरले सही जानकारी प्रदान गर्नेछ। तपाईं आफ्नो अन्तिम अवधि को साथ साथै आफ्नो अवधारणा मिति को खोज गर्न सक्षम हुनेछ। हप्तामा गर्भवती लक्षणहरू गणना गर्न थप उन्नत विधिहरू हुनेछ।
हामी उल्लेख गरौं कि हामी बच्चाहरु को लागि खरीदारी को बारे मा नियमित रूप देखि पोस्ट जोडेंगे, उपहार रजस्टर, यहां सम्म कि बच्चाहरुलाई बौछार को विचारहरु। घनिष्ठ रहनुहोस्! केहि पनि गर्भावस्थाको चमत्कार र जादूको तुलना गर्दैन। यो जीवनको सबैभन्दा ठूलो रचनात्मक प्रक्रियामा संलग्न हुन तपाईंको मौका हो। यो अनुभवको लागि अगाडिको योजना तपाईं र बच्चाको लागि राम्रो गर्ने मौकाहरू सुधार गर्न सक्छ। यो पहिचान गर्न वा केही गर्भावस्था लक्षणहरू पनि कम गर्न मद्दत गर्न सक्छ। तपाईंको जीवनशैलीले तपाईंको बच्चाको स्वास्थ्यलाई असर गर्छ, तर तपाइँ गर्भवती लक्षणहरू हप्तामा हप्तामा पनि असर गर्न सक्छ। तपाईंको गर्भावस्था हप्ताको लागि हप्ता सम्मको योजना बनाएर, तपाईं तपाईंलाई बीमा गर्नुहुन्छ र तपाईंको बच्चाले राम्रो चीजहरूमा अवस्थित छ र तपाईंको गर्भावस्थाको समयमा हानिकारक चीजहरूबाट बच्न। समयमै प्रायः महिलाहरूले उनीहरूलाई गर्भवती छन् भनेर उनीहरूले गर्भवतीमा एक देखि दुई महिनाका हुन्छन्। उनीहरूले उनीहरूको डाक्टरलाई देख्दा तिनीहरू दुई वा तीन महिना सँगै हुन्छन्। यही कारणले हप्तामा गर्भावस्था लक्षणहरू ट्र्याक गर्ने कुञ्जी हो। गर्भावस्थाको पहिलो 12 हप्ता धेरै महत्त्वपूर्ण छन् किनभने यो जब बच्चा यसको प्रमुख अंग प्रणालीहरू बनाउँछ। तपाईंको गर्भवती महसुस गर्नु अघि वा तपाईंको डाक्टरलाई देखाउनु अघि धेरै महत्त्वपूर्ण चीजहरू हुन सक्दछ। गर्भावस्थाको लागि आकारमा हुनु भनेको भौतिक र मानसिक तयारी हो। तपाईं गर्भावस्था को समयमा प्रमुख परिवर्तनों को अनुभव गर्नेछन्। गर्भावस्था भन्दा पहिले राम्रो सामान्य स्वास्थ्य हुन तपाईंले गर्भावस्था, श्रम र डिलिवरीको शारीरिक र भावनात्मक तनावहरूको सामना गर्न मद्दत गर्न सक्दछ। यसले तपाईंलाई नवजात शिशुको हेरविचार गर्न तयार गर्न मद्दत गर्नेछ। हामी तपाईंलाई हप्तामा गर्भवती लक्षणहरू पहिचान गर्न मद्दत गर्छौं। गर्भावस्था हप्ता कैलकुलेटर र सम्बन्धित ब्लग जानकारी मार्फत तपाइँ पूर्णतया तयार हुनुहुनेछ।
माथिल्लो नेभिगेसन प्रयोग गरी विभिन्न भाषामा हाम्रो साइट हेर्नुहोस्। साथै, कृपया आफ्नो गर्भावस्था हप्ता हप्ता, लक्षणहरू, अनुभवहरू, आदि द्वारा टिप्पणी गर्न निःशुल्क महसुस गर्नुहोस्। छिट्टै आउनुहोस्!
विभाग श्रेणी चयन गर्नुहोस् 12 हप्ता गर्भवती 16 हप्ता गर्भवती लक्षण 18 हप्ता गर्भवती2हप्ता गर्भवती लक्षण 8 हप्ता गर्भवती लक्षण गर्भावस्थामा ब्लिङ गर्भावस्था को प्रारम्भिक लक्षण स्वस्थ गर्भावस्था साहसिक गर्भावस्था बिहानको घिमिरे गर्भावस्था गर्भावस्था निर्वहन गर्भावस्था लक्षण गर्भवती भिडियो हप्ता हप्ता Tubal Pregnancy
हामी डाक्टरहरू होइनौं र यस वेबसाइटमा जानकारी चिकित्सा सल्लाहको होइन। हामी सही जानकारी प्रदान गर्न हाम्रो सबै भन्दा राम्रो प्रयास गर्दछौं तर हामी कुनै ग्यारेन्टी गर्दैनौं। हामी तपाईंलाई आग्रह गर्दछौं कि तपाइँ डाक्टर वा OBGYN बाट धैर्य चिकित्सा सल्लाह खोज्न चाहानुहुन्छ।
गर्भवती द्वारा हप्ता
ब्लग गर्भावस्थाको हप्तामा जाँच गर्नका लागि धन्यबाद। साइटको विषय हो गर्भावस्था हप्ता हप्तामा। हामी गर्भधारण लक्षण हप्ता हफ्ते द्वारा प्रदान गर्दछ, र सम्बन्धित जानकारी, प्रसव मार्फत गर्भावस्था शुरुवात गर्भ गर्नाले।
गर्भवती भिडियो हप्ता 40
गर्भवती भिडियो हप्ता 39
गर्भवती भिडियो हप्ता 38
गर्भवती भिडियो हप्ता 37
गर्भवती भिडियो हप्ता 36
प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित। अस्वीकरण: हामी डाक्टरहरू होइनौं र यस वेबसाइटमा जानकारी चिकित्सा सल्लाह छैन। हामी सही जानकारी प्रदान गर्न हाम्रो सबै भन्दा राम्रो प्रयास गर्दछौं तर हामी कुनै ग्यारेन्टी गर्दैनौं। हामी तपाईंलाई आग्रह गर्दछौं कि तपाइँ डाक्टर वा OBGYN बाट धैर्य चिकित्सा सल्लाह खोज्न चाहानुहुन्छ।